Vaovao - Fahalalana resin i Cation
Ny resina cation-exchange resins dia ampiasaina amin'ny fitsaboana hyperkalaemia amin'ny alàlan'ny fanafainganana ny fahaverezan'ny potasioma amin'ny alàlan'ny tsinay, indrindra eo amin'ny sehatry ny famoahana urin ratsy na alohan'ny dialysezy (ny fomba mahomby indrindra amin'ny fitsaboana hyperkalaemia). Ny resins dia misy fitambaran'ny molekiola lehibe tsy mety ritra mitondra fiampangana miiba, izay mamatotra moramora ny ion (cations) voavidy tsara; ireo dia mifanakalo mora amin'ny cations amin'ny tontolo iainana amin'ny habe izay miankina amin'ny fifandraisany amin'ny resina sy ny fifantohany.
Ny resina feno sodium na calcium dia manakalo ireto cations ireto indrindra amin'ny cations potassium ao amin'ny tsinay (potassium potassium 1 mm per g resin); ireo cations afaka (kalsiôma na sodium) dia voadoka ary ny resina miampy potasioma mifatotra dia ampitaina ao anaty fazana. Ny resina dia tsy misoroka ny fandraofana ny potasioma voatelina fotsiny, fa mandray koa ny potasioma miafina ao anaty tsinay ary mamerina mamaky matetika.
Amin'ny hyperkalaemia, ny fitantanana am-bava na ny fihazonana enemas amin'ny resina polyphyrene sulphonate dia azo ampiasaina. Ny resina sodium-phase (Resonium A) dia mazava ho azy fa tsy tokony hampiasaina amin'ny marary tsy fahombiazan'ny voa na ny fo satria mety ho vokatry ny fatran'ny sodium be loatra. Ny résinina (calcium résonium) dia mety hiteraka hypercalcaemia ary tokony hialana amin'ny mararin'ny predisposed, ohatra ireo izay manana myeloma marobe, carcinoma metastatic, hyperparathyroidism ary sarcoidosis. Am-bava izy ireo dia tena tsy mety mankafy, ary satria ny marary enina dia tsy mahavita mitahiry azy ireo raha mbola ilaina (farafaharatsiny 9 ora) mba hanakalozana potasioma amin'ireo toerana rehetra misy amin'ny resina.